Siyaasiin doonaya sharuudo adag in lagu xiro shaqo doonka dalka ku cusub - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay onsdag 10 maj 2017 kl 17.02
Wasiirka suuqa shaqada - iyo meeleynta dadka dalka ku cusub Ylva Johansson. sawir: Marko Säävälä/TT
Sharuuddo adag oo lagu xiro dadka dalka ku cusub ee shaqo doonka ah iyo shaqooyinka fudud oo la badiyo ayaa ka mid ah jawaabta dowladda iyo mucaaradka ee ah wax ka qabadka tirada shaqo la'aanta ee sii kordhaysa.
Tirokoob dhawaan ka soo baxay xaafiiska shaqada ayaa muujiyay in tirada shaqo la’aanta ku sugan ay markii ugu horeysay tan iyo sannadkii 2013 kor u sii kacday. Elisabeth Svantesson oo xisbiga Moderaterna u qaabilsan siyaasadda shaqada ayaa ka mid ah siyaasiintii arrintan maanta ka hadlay.
– Waxaa haboonaan laheyd in shardi looga dhigo dadka Sweden imaanaya waxbarasho. Dowladda waqti ayey hadal heysay shaqooyin fudud balse wax natiijo ah lagama hayo, waxaan qabnaa in arrintan laga dhabeeyo haddii kale shaqo la’aanta dadka soogalootiga ah waa sii kordheysaa sannadyada soo socda, ayey tiri Elisabeth Svantesson.
Tirkoobka bisha abriil ayaa muujyey in tirada shaqo la’aanta ku sugan ay tahay 364 000 oo qof, taas oo ah kor u kac dhan 4 000 oo ruux sannad gudahiis.
Xisbiga Moderaterna ayaa doonaya shardi in looga dhigo dadka dalka ku cusub waxbarasho in ay sameystaan
Wasiirka shaqada Ylva Johansson (S) ayaa sheegtay in wax ka baddelka lagu sameeyey hanaanka meeleynta dadka dalka ku cusub ee loo yaqaan etableringsuppdraget oo xaafiiska shaqada gacanta ku hayo ujeedada laga leeyahay tahay sharuudo adag in lagu soo rogo shaqo doonka dalka ku cusub.
– Waa in sharuudo ku xiri karnaa dadka dalka ku cusub si ay ugu hogaansamaan howlaha loo diro, kuwo aan u hoggaansamina tillabo laga qadi karo, shardi laga dhigo shaqada qofka loo soo helay in uu qaato, ayey tiri Ylva Johansson.
onsdag 10 maj 2017 kl 13.42
onsdag 10 maj 2017 kl 11.02
onsdag 10 maj 2017 kl 12.08